လှိုင်းနှုန်းသည် UHF AZ-9662 အင်းလေး Card ကို, ဂြိုလ်သား h3 Long-range ကိုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို, Road Toll ETC Card, UHF 6C White Card, ISO18000-6C အဖြူရောင်ကဒ်, ဂြိုလ်သား Higgs3 Card ကို, Long-range Alien Higgs3 White Card
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF AZ-9662 အင်းလေး Card ကို, ဂြိုလ်သား h3 Long-range ကိုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို, ISO18000-6C အဖြူရောင်ကဒ်, ဂြိုလ်သား Higgs3 Card ကို
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို ဂြိုလ်သား h3 Long-range ကိုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို, ဂြိုလ်သား Higgs3 Card ကို, ISO18000-6C အဖြူရောင်ကဒ်, Long-range Alien Higgs3 White Card, Road Toll ETC Card, UHF 6C White Card, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF AZ-9662 အင်းလေး Card ကို
န့်ကို: ဂြိုလ်သား Higgs3
အင်းလေး: ဂြိုလ်သား AZ-9662
protocol စံ: EPC C1 ဟာ GEN2, ISO ကို 18000-6C
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 860~ 960MHz
EPC Code ကို: 96နည်းနည်း
ဖတ်ခြင်းနှင့်အချိန်ရေးသားခြင်း: 1~ 2ms
စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းအကွာအဝေး: 6~ 8 မီလီယံ (လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို, : P = 5w, 12Dbi)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -25℃ ~ + 80 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -10℃ ~ + 40 ℃
Eraser ကြိမ်: >100,000 ကြိမ်
ကဒ်ပစ္စည်း: PVC, ကို ABS, ပေ, PETG, စက္ကူ
ရှုထောင့်: က ISO စံကဒ် 85,6 × 54 × 0,80(+/-0.04)မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထုံးစံအရွယ်အစား
Characteristics: read and write speed, long sensing distance, high sensitivity; တန်ဖိုးနည်း, good performance is stable,agood encryption effect is widely used in supply chain management, logistics distribution, product certification, fixed assets inventory and tracking, baggage handling and tracking, single labeling, စသည်တို့ကို.
Can do products: RF tags, self-adhesive labels, white cards, printing cards, composite cards, special-shaped non-standard size cards, keychains, wristbands, အကြွေစေ့ tags များ, စသည်တို့ကို.
Library, clothing management, medical management, animal farms, ပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှု, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, road toll ETC cards, parking lot cards, identification tags, စသည်တို့ကို.
I am interested in your product UHF AZ-9662 Inlay Card, ဂြိုလ်သား h3 Long-range ကိုလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို, ISO18000-6C အဖြူရောင်ကဒ်, ဂြိုလ်သား Higgs3 Card ကို
prev: Mifare Ultralight Chip အင်းလေး Card ကို
နောက်တစ်ခု: ဦးကုတ် HSL ထူးအိမ်သင် Card ကို, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) ကားရပ်နားကွင်းကို Long Range 915MHz Card ကို, ISO ကို 18000-6B အဖြူရောင်ကဒ်